कवि, तिमी काम चाहिँ के गर्छौ ? | निबन्ध | जुगल भुर्तेल | दशैं साहित्य विशेष
ब्रोद्स्कीः मैले कविता लेखें । यही नै मेरो काम हो । मलाई विश्वास छ... मैले जे लेखेको छु, त्यो आज मात्र होइन भविष्यको पिढीलाई पनि उपयोगी हुनेछ ।
जोसेफ ब्रोद्स्कीको जन्म सन् १९४० मा रूसको लेनिनग्राद शहरको एउटा यहुदी परिवारमा भएको थियो । तत्कालीन सोभियत सत्ता नारा त ‘अन्तर्राष्ट्रिय जाति’ निर्माणको दिन्थ्यो, तर आफ्ना नागरिकलाई हरेक पाइलामा ‘तिमी कुन जाति को’ भनेर सोधिरहन्थ्यो— पुस्तकालयको फारमदेखि स्कूलको हाजिरी कापीसम्म ।
लेनिनग्रादमा युवा कवि ब्रोद्स्की
जातपातका मामिलामा राज्यसत्ता स्वयं यसरी जिज्ञाशु बनेपछि समाजमा असहिष्णुताको अंकुरण त हुने नै भयो । परिणामतः ब्रोद्स्की सानै उमेरमा विभेदको शिकार बने । स्कूलमा सहपाठी मात्र होइन, शिक्षकहरूले समेत बारम्बार उनको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याइरहेपछि उनी ‘अप्ठ्यारा’ विद्यार्थीमा परिणत हुँदै गए र अन्तत: सात कक्षापछि उनले स्कूलै त्यागिदिए । गरीबी र रोगले च्यापेका माता–पितालाई केही आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उनले स्थानीय कारखानामा मेशीन चालकको पदमा नोकरी शुरू गरेका थिए । तर सृजनाको अर्कै मुहान फुटाउने छटपटीले अधीर प्रतिभा स्थायी जागिरमा टिक्न सम्भव भएन । उनी कहिले डाक्टर बन्ने धुनमा स्थानीय जेलको मूर्दाघरमा शरीर विज्ञान विशेषज्ञसँग लाश चिरफार गर्न संलग्न भए त कहिले भूगर्भविदको टोलीमा सहयोगी बनेर साइबेरिया पुगे । यो अस्वाभाविक भट्काइ (सन् १९५६–६३) को क्रममा उनले १३ ठाउँमा काम थाल्दै छोड्दै गरेका थिए ।
सोभियत स्कूलको औपचारिक शिक्षामा कुनै रुचि नभए पनि उनका डायरीका पानाहरू विस्तारै कवितात्मक भावनाले भरिँदै गएका थिए । त्यस जमानाकी प्रसिद्ध रूसी कवयित्री अन्ना अखमातोभाको संगतमा पुगेपछि उनको प्रतिभा झनै तिखारियो ।
अखमातोभाले सोभियत राजनीतिक दमनका क्रममा आफ्ना पहिला र दोस्रा पति क्रमशः कवि निकोलाइ गुमिलेभ र निकोलाइ पुनिन तथा कवि साथी ओसिप मान्देल्श्तामलाई गुमाइसकेकी थिइन् । उनका छोरा लेभ गुमिलेभले स्तालिनको श्रमशिविरमा धेरै वर्ष बिताएका थिए । त्यसैले उनका सृजनामा विद्रोहको स्वाभाविक प्रचूरता हुने नै भयो । अखमातोभा जस्ता विद्रोही कविका रचनाले ब्रोद्स्कीलाई कलिलै उमेरमा आकर्षित गर्न थालेका थिए । १७ वर्षको हुँदा नहुँदै स्वयं ब्रोद्स्कीका कविता सार्वजनिक भइसकेका थिए । त्यस बेलाको चलन अनुसार, युवा कविहरू विभिन्न सरकारी क्लब, साहित्यिक समुह आदिमा संलग्न भएर साहित्य सृजनाको तालीम लिने र अनुभव साटासाट गर्ने गर्थे । तर ‘साम्यवादी मापदण्ड अनुकूल’ को सृजना गर्न प्रेरित गर्ने त्यस्तो संकुचित वातावरण ब्रोद्स्कीको स्वभाव र प्रतिभा अनुकूल थिएन । अखमातोभाहरूकै हौसलाले लेनिनग्रादको ‘इन्टलेक्चुअल अण्डरग्राउण्ड’ मा ब्रोद्स्की भित्रको कविले एउटा हैसियत पायो । युवाहरूले निकै मन पराएकोले उनको ख्याति छिट्टै फैलिंदै गयो ।
स्तालिनको मृत्युपछि सोभियत संघमा राजनीतिक दमनको चक्र केही खुकुलो भए पनि उनका उत्तराधिकारी निकिता ख्रुश्चेभको शासनकालमा ‘साम्यवाद ल्याएरै छाड्ने’ कटिवद्धता झन् घनीभूत भएर आएको थियो । त्यो अठोट पूरा गराउन तत्कालीन सर्वोच्च सोभियत (संसद्) ले ४ मई, १९६१ मा ‘समाज–उपयोगी कामबाट भाग्ने प्रवृत्ति भएका र परजीवी प्रकृतिको असामाजिक जीवन बिताइरहेका मानिस विरुद्धको अभियानलाई सशक्त पार्ने’ एउटा कानूनी आदेश जारी गर्‍यो । त्यस अनुसार कम्तीमा वर्षको चार महीना ‘काम’ नगर्ने मान्छे अबदेखि‘अपराधी’ मानिने भयो । त्यस्ता ‘अपराधी’ लाई अधिकतम पाँच वर्ष सजाय तोकिएको त्यो कानून मूलतः केही कामै गर्न नचाहने आवारा, जँड्याहा, गुण्डा र असामाजिक चरित्रका मानिसप्रति लक्षित थियो । ब्रोद्स्कीको प्रभावमा परेर लेनिनग्रादका सम्पूर्ण युवा ‘बिग्रिने’ त्रासले आत्तिन थालिसकेको सोभियत सत्तालाई त्राण दिन यही कानूनको हतियार बोकेर अग्रसर भए– ब्रोद्स्कीका छिमेकी एवं सेवानिवृत्त गुप्तचर (केजीबी) अफिसर याकोब लेर्नेर । उनले ब्रोद्स्की जस्ता ‘आवारा’ टाइपका युवकबाट शहरलाई मुक्त पार्ने प्रण गरेका थिए ।
२९ नोभेम्बर सन् १९६३ को ‘सन्ध्याकालीन लेनिनग्राद’ मा छापिएको लेर्नेरको लेख
फ्रिदा भिग्दोरोभाले इजलासमा लुकीछिपी गरेको टिपोट
त्रासजन्य मौनताको संस्कृतिले आक्रान्त समाजमा स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने वा स्वतन्त्र जस्तो देखिने मानिसहरू ‘खतरनाक’ ठानिन्छन् । ख्रुश्चेवको कम्युनिष्ट सत्तालाई ब्रोद्स्की जस्ता ‘साम्यवाद निर्माण’ मा अवरोध सृजना गर्ने ‘सोभियत मापदण्ड’ विपरितका मान्छे चाहिएका थिएनन् । तर ख्रुश्चेभको उदयसँगै समय अलि बदलिएको हुँदा स्तालिनकालमा जस्तो ब्रोद्स्कीलाई ‘सिध्याउन’ लेर्नेरको त्यो लेख मात्र अलि पर्याप्त थिएन । त्यसैले पाठकका नाममा प्रायोजित प्रतिक्रियाहरू उत्पादन गरिए । अन्ततः नागरिक स्वयंसेवीहरूको दस्ताले उनलाई पक्रिएर प्रहरीलाई बुझाइ छाड्यो ।
१३ मार्च १९६४ का दिन लेनिनग्राद शहरको देर्झिन्स्की अदालतमा २४ वर्षीय कवि ब्रोद्स्कीको मुद्दामा बहस हुँदै थियो । उनीमाथि युवावर्गमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कविता लेखेको, कामचोर र पराश्रित जीवन बिताएको आरोप थियो । इजलास बाहिरको सूचनापाटीमा टाँसिएको थियोः ‘परजीवी ब्रोद्स्कीसम्बन्धी मुद्दा’।
ब्रोद्स्कीको न्यायिक संघर्षलाई ठूलो साहसका साथ विश्वप्रसिद्ध गराइदिने रुसी पत्रकार, साहित्यकार फ्रिदा अब्रामोभ्ना भिग्दोरोभा
दोस्रो पेशी (१३ मार्च १९६४) अदालतमा ब्रोद्स्कीको मुद्दामाथि बहस हुँदै
अदालतमा ब्रोद्स्कीको मुद्दामाथि बहस हुँदै
सोरोकिन (सरकारी वकील): तपाईंले भावी पिढीको कुरा गर्नुभयो । के तपाईं आफूलाई आजकाले बुझदैनन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
ब्रोद्स्कीः छन् । चुकोभ्स्की र मार्शाकले मेरो अनुवादको धेरै प्रशंसा गरेका छन् । वास्तवमा,मेरो काम त्यति धेरै प्रशंसायोग्य छैन ।
सन् १९८७ को साहित्यमा नोबेल पुरस्कार ग्रहण गर्दै ब्रोद्स्की । फोटो: ब्रोद्स्कीका मित्र र साहित्यकार रेइनको व्यक्तिगत संकलनबाट
ग्रुदिनिनाः मैले ब्रोद्स्कीका १९५९ देखि १९६० सम्मका कविता पढेकी छु । ती अझै आलाकाँचै त थिए, तर तिनमा आकर्षक बिम्ब र कल्पनाको प्रयोग भएको भने देखिन्थ्यो । त्यसपछिका उनका सृजनाका बारेमा म अनभिज्ञ रहेकाले सन्ध्याकालीन लेनिनग्रादमा लेर्नेरको लेख छापिएपछि मैले ब्रोद्स्कीलाई बोलाएर उनका अनुवादहरूको पाण्डुलिपि मागेकी थिएँ । म साहित्य समालोचक र स्वयं कवि भएको नाताले के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने ब्रोद्स्कीले गरेका अनुवाद उच्च व्यावसायिक स्तरका छन् ।
एफिम एतकिन्द (लेखक संघका सदस्य, गेर्चेन स्मृति शिक्षा–विज्ञान इन्ष्टिट्यूटका अध्यापक): म अनुवाद क्षेत्रका नवप्रवेशीलाई तालिम दिने काम गर्छु । त्यसैले मैले धेरै युवा साहित्यकारहरूको अनुवाद पढेको र सुनेको छु । यसै क्रममा एक वर्ष अघि ब्रोद्स्कीले अनुवाद गरेको पोल्याण्डका प्रसिद्ध कवि गोजिन्स्कीका कविताहरूको अनुवाद हेर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यसको शैलीगत स्पष्टता, गेयात्मकता, आवेग र छन्दको ऊर्जाले ममाथि निकै ठूलो प्रभाव पारे । ब्रोद्स्कीले कसैको सहयोग बिना आफ्नै प्रयत्नले पोलिस भाषा सिकेको थाहा पाउँदा म आश्चर्यचकित भएँ ... मैले तुरुन्तै बुझें, मेरो भेट निरन्तर काममा लागिरहने धैर्य भएको असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तिसँग भएको छ... मैले उनीसँग धेरै वार्तालाप गरेको छु र उनको अमेरिकी, बेलायती र पोलिस साहित्यको ज्ञानले मलाई चकित पारेको छ ... मिहिनेत, ज्ञान र प्रतिभाको संयोजन चाहिने हुँदा कविताको अनुवाद साह्रै कठिन काम हो । यो बाटोमा हिंड्ने लेखकले असंख्य असफलताबाट गुज्रिनु पर्छ । भौतिक प्रतिफल त निकै टाढाको विषय हो । कैयौं वर्ष अनुवाद गर्दा पनि एक रुबल (रुपैयाँ) कमाइ नहुन सक्छ । यसका लागि कविता र स्वयं कामप्रति निस्वार्थ लगाव चाहिन्छ । ब्रोद्स्कीलाई कवि–अनुवादकको हैसियतले काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । मलाई विश्वास छ यो क्षेत्रमा उनको ठूलो भविष्य छ... बाहिर टाँसिएको ‘परजीवी ब्रोद्स्कीसम्बन्धी मुद्दा’ भन्ने सूचनाले मलाई निकै विस्मित तुल्यायो.. अदालतमा त्यस्तो वाक्य स्वीकार्य हुन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ... उनी जस्तो सिर्जनात्मक प्रतिभा भएको व्यक्तिले चाहँदा आँखामा छारो हाल्न केले रोक्थ्यो? सहजतापूर्वक काम गर्ने वातावरण भएको भए उनले सयौं लाइन अनुवाद गर्न सक्थे । उनले थोरै पैसा कमाउनुको अर्थ उनी परिश्रमी छैनन् भन्ने होइन।
स्मिर्नोभ (अभियोजन अर्थात् सरकारी पक्षका साक्षी, रक्षागृह प्रमुख): व्यक्तिगत रूपमा म ब्रोद्स्कीलाई चिन्दिनँ । तर सबै जनताले ब्रोद्स्कीकै जस्तो व्यवहार गर्न थाले भने हामीले धेरै कालसम्म साम्यवादको निर्माण गर्न सक्दैनौं । मान्छेको बुद्धि खतरनाक हतियार पनि हो । यहाँ धेरैले उनी अपूर्व प्रतिभाशाली छन् भने, तर कसैले भनेन उनी कस्ता मानिस हुन् । बौद्धिक परिवारमा हुर्किएर पनि उनको शैक्षिक योग्यता सात कक्षा मात्र छ । लौ, यहाँ उपस्थित मान्छेले भनुन्– के तिनीहरू सात कक्षा मात्रै पढेको छोरो चाहन्छन् ? ... उनी प्रतिभाशाली अनुवादक हुन् भनियो, तर किन कसैले भनेन कि उनको दिमाग गोलमाल छ ? फेरि ती सोभियत विरोधी कविताका लाइनहरू ? ... उनले आफ्ना थुप्रै विचार बदल्नुपर्छ.. अनिवार्य श्रम गर्न लगाएर उनको उपचार गरिनुपर्छ । ब्रोद्स्कीः ...मेरो बारेमा तपाईंलाई यति धेरै कसरी थाहा भयो ?
अद्‍मोनी (गेर्चेनस्मृति इन्ष्टिट्यूटका प्रोफेसर, भाषाविद्, समालोचक, अनुवादक): ब्रोद्स्कीमाथि परजीवी भएको आरोपमा मुद्दा चलेको थाहा पाएपछि अदालतलाई केही भन्नु मैले आफ्नो दायित्व सम्झेको छु । तीस वर्ष युवाहरूसँग काम गरेको, उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्राध्यापन गरेको र धेरै समयदेखि अनुवादकर्ममा संलग्न भएको आधारमा मलाई यो अधिकार छ भन्ने ठान्छु । मेरो उनीसँग व्यक्तिगत चिनजान छैन भने पनि हुन्छ । हामी अभिवादन त गर्छौंं, तर आजसम्म दुई वाक्य पनि बोलेका छैनौं । तर विगत एक वर्षदेखि निकै नजिकबाट उनको अनुवादलाई नियालिरहेको छु, किनकि ती सुन्दर र प्रतिभापूर्ण छन् । गोजिन्स्की, फेर्नान्देज (क्युबाली कवि) को जुन अनुवाद उनले गरेका छन्, त्यसका आधारमा म विश्वासका साथ भन्न सक्छु, त्यसमा ठूलो मिहिनेत परेको छ । त्यसले अनुवादकको असाधारण सीप र संस्कृतिलाई प्रमाणित गर्छ ... जुन कानूनी व्यवस्थाका आधारमा उनी आरोपित भएका छन्, त्यो वास्तवमा थोरै काम गर्नेका विरुद्धमा लक्षित कानून हो, न कि थोरै कमाउनेका विरूद्ध ... त्यसैले ब्रोद्स्कीलाई परजीवीको आरोप लगाउनु हास्यास्पद छ । ब्रोद्स्की जस्तो कठोर र धेरै मिहिनेत गर्ने मानिस, जसले आफ्नो सीपलाई तिखार्न र उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिको सृजना गर्न आफ्ना आवश्यकतालाई सीमित गरेको छ, त्यस्तो मानिसलाई पराश्रितको आरोप लगाउन मिल्दैन।
न्यायाधीशः तपाईंले के भन्न खोज्नुभएको ? के तपाईंले ४ मईको आदेश पढ्नुभएको छैन ? लाखौं मानिसले मिहिनेत गरे मात्र साम्यवादको निर्माण हुन सक्छ । अद्‍मोनी: समाजका लागि लाभदायक हरेक काम आदरणीय हुनु पर्छ ।
संध्याकालीन लेनिनग्रादमा प्रकाशित ब्रोद्स्कीको मुद्दाको फैसला सम्बन्धि समाचार
अमेरिकाको माउन्ट हलिओक कलेजका आफ्ना विद्यार्थीलाई ब्रोद्स्कीले पढ्नै पर्ने भनेर सुझाव दिएका पुस्तकको सूची । कम्तिमा यति पुस्तक नपढी कुनै सार्थक संवाद हुन नसक्ने उनको ठहर थियो
पुश्किन र दोस्तोएभ्सकी जस्ता महान अग्रजहरूको शहरमा जन्मिएको र ‘असल नागरिक’ हुन नसकेको आरोपमा आफ्नै देशबाट निकालिएको ‘अप्ठ्यारो’ यहुदी केटो ‘परजीवी आवारा’,रूसी कवि, अंग्रेजी निबन्धकार हुँदै सन् १९८७ मा साहित्यको नोबेल पुरस्कार विजेता बन्यो । त्यस बेलासम्म उनका कविता विश्वका धेरै भाषामा अनुवाद भइसकेका थिए ।
(यो लेखको लामो अंश शिक्षक मासिक को असार, २०७३ अंकमा प्रकाशित छ ।)